विमानस्थलमा विदेशबाट फर्कनेका लागि कडाइ : कुन सामानको भन्सार कति ? – Information
विमानस्थलमा विदेशबाट फर्कनेका लागि कडाइ : कुन सामानको भन्सार कति ?
काठमाडौं । सरकार विदेशबाट फर्कनेहरुले ल्याउने सामानमा कडाईका साथ कार्यान्वयनमा उत्रिएको छ । गत सोमबार सरकारले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुले बढी परिणाममा ल्याएको सामान बिक्रीका लागि सुचना निकालेको छ । जुन सरकारले जफत गरेको थियो । यसबाटै पुष्टि हुन्छ सरकारले कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । कतिपयलाई थाहा नभएका कारण पनि मनलाग्दी आफु खुसीका परिणामका सामान भित्रने पनि गरेको छ ।
सरकारले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नीजि गुण्टा तथा झिटी भारी सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । यसमा कुन सामान ल्याउँदा छुट र कुनमा कति महसुल लाग्छ भनेर स्पष्ट भनिएको छ । त्यसपछि गत जेठमा एउटा बुँदा परिमार्जन गरेर पुन: सूचना जारी गरेको थियो । यहि सूचनालाई टेकेर कार्यान्वयनमा सरकारले कसेको हो । धेरै समय अगाडि निजी गुण्टा, झिटी भारी सुचना जारी गरेर नै हवाइ यात्रुले विदेशबाट ल्याउने र लैजाने सामानमा कडाइ गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । तर, पछिल्लो समय सरकार विदेशबाट हवाइ यात्रुले ल्याउने सामानमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागि परेको हो ।
सुचनाको दफा एकमा लुगाफाँटा, घरगृहस्थीका सामान, उपचार गरेर फर्केको विरामीले ल्याएको औषधी, अशक्त यात्रुले साहाराका रुपमा प्रयोग गर्ने सामान, ट्याबलेट, ल्यापटप, घडी, क्यामेरा, भिडियो, सेलुलर, फेन ड्राइभ जस्ता सामान एक/एक थान ल्याउँदा पूर्ण छुट हुनेछ भनिएको छ । यसमा यात्रुले कुनै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छैन ।
एक लिटरको मदिराको बोतल र सातकिलो ग्रामसम्मको खाद्य परिकारमा पनि भन्सार महसुल लाग्ने छैन । तर, कस्मेटिक, जुत्ता, लुगाफाटामा बढीमा १५ थानसम्म ल्याउन पाइनेछ तर यसमा फ्ल्याट महसुल तिर्नुपर्नेछ ।सुन पहिलो पचास ग्रामसम्म प्रति १० ग्रामको ५ हजार दुई सय रुपैयाँ, पचासग्राम भन्दा बढी थप ५० ग्राममा प्रति दश ग्रामको ६ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्नेछ । विदेश जाँदा सौगातको रुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको मालसामानमा कुनै महसुल नलगाइ लैजान पाइनेछ । तर मूल्य अभिबृद्धि लाग्ने सामानमा भने स्थायी लेखा नम्बर भएको बीजक पेश गरेमा मूल्यको सिमामा बन्देज लागु हुनेछैन ।
Previous प्रतापपुर अध्यक्ष भलिबल प्रतियोगिता फागुन २ गते देखि सुरु हुने ।
Next २ महिनापछि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण बन्द हुने अवस्थामा